I Am Sorry , I Love You ( 2015 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel May 03, 2017
The Lost Tomb နဲ့ Buzzer Beat လေး ပြီးသွားပြီဆိုတော့ နောက်ထပ် series လေးတစ်ခုနဲ့ တင်ဆက်ပေးပါရစေ ...
ဒီဇတ်ကားလေးဟာ 2015 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Taiwan Series လေး တစ်ခုဖြစ်ပြီး အပိုင်းရေ ၁၃ ပိုင်း ပါဝင်ထားပါတယ် ...
Jasper Liu , Bryant Chang & Andrea Chen တို့က အဓိက Main Cast တွေ အနေဖြင့် ပါဝင်ထားပါတယ် ... ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားလေးကတော့ Fantasy , Romance လေးပါ ....
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ - ဟန်​စီရီ ( Andrea Chen ) ဆိုတဲ့​ကောင်​မ​လေးဟာ သူချစ်​သူ​ကောင်​​လေး ​ပေးခဲ့တဲ့နာရီလေးဟာ အခြေအနေတစ်ရပ်ကြောင့် ပျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ် ... ဘယ်​ဆိုင်​မှာလိုက်​ပြင်၍မရတော့ပဲ ... ​နောက်​​တော့ သူ့သူငယ်​ချင်း တန်​ကျန့်​နန်​ က ၀န်​ရှုဟိုင်​ ( Bryant Channel ) ဆိုတဲ့အင်​ဂျင်​နီယာ​လေးကိုသွားပြင်​ခိုင်းပါတယ်​ ...
ကံ​ကောင်း​ထောက်​မစွာနဲ့ပဲ ၀န်​ရှုဟိုင်​ကပြင်​လို့ရသွားပြီး ... သူအဲ့နာရီကို စမ်းဝတ်​ကြည့်​လိုက်​တဲ့အခါမှာ​တော့ နာရီ ထဲက​နေ ၀ိဥာဉ်​တစ်​ခ ဝုန်းခနဲ ထွက်ပေါ်လာပါတယ် ...
ဟန်​စီရီ (Andrea Chen ) နှင့်​ ၀ိဥာဉ်​ နှင့်​ဘယ်​လိုပတ်​သက်​မှုရှိလဲ ?
ဘာလို့ ၀န်​ရှုဟိုင်​ နာရီဝတ်​လိုက်​​တော့မှ ၀ိဥာဉ်​ ကထွက်​ပေါ်လာရတာလဲ ?
ဆိုတာကိုတော့ " I Am Sorry , I Love You " ဆိုတဲ့ ဒီ ဇာတ်ကားလေးမှာ ဆက်ပြီး အဖြေရှာလိုက်ရအောင်နော် ...
Fantasy ဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းလေးကို Romance , Comedy လေးတွေနဲ့ ရောနှေပြသထားတာမို့ Fantasy ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်ရော ... Romance ဇာတ်လမ်းတွေကို ခုံမင်နှစ်သက်သူတွေ အတွက်ရော အကြိုက်တွေ့စေလိမ့်မယ်လို့ ရဲရဲကြီးကြီး အာမခံလိုက်ရပါတယ် ...
Rating အရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ Viki မှာ 9.2/10 နှင့် MyDramaList မှာ 7.6/10 ရရှိထားတာဆိုတော့ ဇာတ်ကားမကောင်းမှာ စိတ်မပူရတော့ဘူးလို့ပဲ ထပ်ညွှန်းလိုက်ပါရစေနော် ...
Translator - Sandar Lwin
Episode 13 - Final ( Openload Link )
Fantasy Romance Taiwen
Labels: Fantasy Romance Taiwen
Kyar Win Maung May 4, 2017 at 1:38 AM
Bollywood ဇာတ်ကားလေးတွေလဲ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်❤️❤️
kyaw kyaw May 5, 2017 at 6:57 AM
jananglesmile May 6, 2017 at 9:20 AM
ပိုး ဟတ်ဖြူ May 7, 2017 at 1:04 AM
kyaw kyaw May 11, 2017 at 7:35 AM
အပိုင်းဆက်လေးတွေထပ်တင်ပေးပါအုံး ဘယ်သူတွေဘဲ ကြည်ကြည်မကြည်ကြည် ကျနော်ကတော MA TV C ရဲ့ ထာဝရ ပရိတ်သတ် တစ်ယောက် အနေနဲ့ အမြဲတန်းအားပေနေပါတယ် ဗျာ
kyaw kyaw May 18, 2017 at 5:58 AM
မျော်နေတယ် ဗျာ ပိုင်းဆက်လေးတွေ တင်ပေးပါအုံး
Unknown June 3, 2017 at 1:34 AM
kyaw kyaw June 3, 2017 at 3:55 AM
ထပ်ဖြည်းပေးပါအုံး ဗျာ ကောင်းကွက်လေးတွေရောက်လာပီ
kyaw kyaw June 5, 2017 at 8:50 AM
ep 12'13 please please please
Hein Sett July 7, 2017 at 7:36 AM
Myo Myo August 13, 2017 at 2:22 AM
can't download episode 9. please upload episode9again
Chaw Su Tin August 21, 2017 at 1:19 AM
ep9မရဘူးလေ
Jipsy Lay September 13, 2017 at 12:43 AM
ep5က မရဘူး
Dr. Zwe September 16, 2017 at 5:32 AM
Ican't download episode 12